Fiaraha-miasa : hifanakalo traikefa amintsika ny tafika amerikanina | NewsMada
Fiaraha-miasa : hifanakalo traikefa amintsika ny tafika amerikanina
Tonga, afakomaly eto amintsika, ireo mpianatra Capstone, mpandray vatsim-pianarana miisa17 tarihin’ny manamboninahitra amerikanina, ny amiraly Johnson. Tafiditra amin’ny fiofanana ataon’izy ireo izao fitsidihana izao hahatakarany lalindalina kokoa ny fiarovana, ny fitandroana ny filaminana, ary ny olana ara-politika atrehin’ny firenena mpiara-miombona antoka amin’i Etazonia. Hihaona sy hifanakalo hevitra amin’ny manam-pahefana miaramila sy sivily izy ireo. Anisan’izany ny manamboninahitra mirotsaka amin’ny fiarovam-pirenena sy ny fandriampahalemana, ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ary ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny.
Ankoatra izany, hitsidika ny vondron-tafika misahana ny fandriampahalemana izy ireo ary hijery ny fomba mety hahatonga an’i Madagasikara hitondra ny anjara birikiny amin’ny ezaka fandriampahalemana eo anivon’ny Vondrona afrikanina (UA) sy ny Firenena mikambana (ONU).
Fanjakana tsara tantana sy demokratika
Tsy hijanona eo. Anisan’ny hihaona amin’izy ireo koa ireo manamboninahitra vao notendrena ho “général de brigade” sy ny « contre-amiral » eto amintsika. Manampy izany ny hanokanan’ireto miaramila amerikanina ireto fotoana hiarahana amin’ireo maintimolalin’ny toeram-piofanan’ny departemantan’ny fiarovana amerikanina na ny “African Center for Strategic Studies”. Anisan’ny manolotra ho an’ny mpiara-miombona antoka avy amin’ny firenena afrikanina andiana seminera sy fihaonambe ary fianarana akademika hafa mampirisika ny fanjakana tsara tantana sy ny soatoavina demokratika izany ivontoerana izany.
Hanampy azy ireo hahomby kokoa amin’ny fanomanana sy ny fampiasana ny hery ananan’i Etazonia amin’ny hetsika hiarahan’ny vondron-tafika sy ny mpiara-miombona antoka ny tanjon’ny fiofanana.
Tsiahivina fa vao notendrena ho “général de brigade” izy ireo ary miofana hitana andraikitra avo lenta mitaky fiaraha-mitantana, fiaraha-miasa amin’ny fikambanana hafa, ny governemanta isan-tsokajiny ary ny firenen-tsamihafa. Fitsidihana voalohany ataon’ireo mpianatra Capstone eto Madagasikara izao hatramin’ny niandohan’ny fiofanana ny taona 1982.